Uncategorized Archives - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Min Thuta | Uncategorized | March 8, 2019
၁)ရေများများသောက်ပါ။အထူးသဖြင့် အစားမစားမှီရေများများသောက်ခြင်းဟာ ကယ်လိုရီတွေလောင်ကျွမ်းစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေရန် အထောက်အကူပြုပါတယ်။
Min Thuta | Uncategorized | March 3, 2019
ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုကိုလိုလားသူတွေအတွက် လုပ်ငန်းခွင် မှာ စိတ်နေစိတ်ထားမှအစ အပြုအမူအနေအထိုင်ကအဆုံး ဂရုတစိုက် ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့် သင့်အလုပ်ခွင်မှာ အောင်မြင်မှုရရှိစေမဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။
Min Thuta | Knowledge, Uncategorized | February 16, 2019
ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့ မိမိနဲ့သင့်တော်မဲ့ အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်း Career ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ? မိမိဘဝအတွက် Career ဆိုတာအရွယ်ရောက်သူတိုင်းတွေးကိုတွေးထားမဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါအတွက်တွေးထားတာဘာမှမရှိသေးတဲ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုစတင်ရွေးချယ်ရမလဲမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ရွေးချယ်ရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
Min Thuta | Uncategorized | February 10, 2019
ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ အထူးသဖြင့်လိုအပ်တာကတော့ ရေဓာတ်မဆုံးရှုံးဖို့ပါပဲ။ကလေးသူငယ်များ၊သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအနေနဲ့ဂရုတစိုက်နေထိုင်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
Min Thuta | Uncategorized | February 1, 2019
Detox water ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တွင်းကအဆိပ်အတောက်တွေကိုထုတ်ပေးပြီး အဆီလဲကျ အသားအရည်လဲလှစေရန်သောက်သုံးသင့်တဲ့ အရည်ပါ။
Min Thuta | Uncategorized | June 20, 2018
Min Thuta | Uncategorized | June 19, 2018
လူရယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကလဲရှိနေအုံးမှာပါပဲ။ ကဲဒီတော့ စိတ်ဓာတ်မကျအောင်ဘယ်လိုတွေ နေမလဲ၊ ဘယ်လိုမျိုးအရာတွေက စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို လျှော့နည်းစေလဲဆိုတာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Min Thuta | Uncategorized | June 11, 2018
မိုးရာသီရောက်ပြီဆိုတော့ ခြင်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့
Min Thuta | Uncategorized | June 8, 2018
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုးရာသီရောက်ရင် ခြင်ကျားကိုက်လို့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ အများအပြားရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်လေးတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ကလေးရှိတဲ့ မေမေ၊ဖေဖေတွေကို မပေါ့စကြပါနဲ့လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒီတော့ ခြင်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်း တစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်………
လူသိနည်း၍ အသုံး၀င်သော Android စမတ်ဖုန်း၏ Functions များ
Zwe Thet Paing | Uncategorized | September 19, 2017
ယခုခေတ်တွင် လူတိုင်းလိုလို စမတ်ဖုန်းများ၊ အဆင့်မြင့်တဲ့ဖုန်းများ ကိုင်နေကြပေမယ့် Android device တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးကိုတော့ သိတဲ့သူဟာ အယောက် ၁၀၀ မှာ ၁၀ယောက်သာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူ ၁၀၀ တွင် ၉၀ လောက်မသိကြသေးတဲ့ Android Functions တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေအ ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်
All times are GMT 6.5. The time now is 3:04 pm.